Fadeexooyinkii hilibka fardaha oo ashtakooyin yari ka yimaadeen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Fadeexooyinkii hilibka fardaha oo ashtakooyin yari ka yimaadeen
La daabacay måndag 15 juli 2013 kl 11.55
Sawirle: Heiko Junge/Scanpix
Ilaa iyo markii ay soo shaacbaxday fadeexooyinkii hilibka fardaha looga dhex helay cuntooyinka la qaboojiyey oo lagu sameeyo hilbaha shiidan oo ay ka mid yihiin lasaanyada iyo hilib-shiidshiidka kuuskuusan, waxaa boliiska soo gaaray ashtakooyin ama dacwado aad u yar. Afartii dacwo oo boliiska lagu soo wargeliyey saddex ka mid ah lama soo gudbin, halka mid ka mid ahna la joojiyey in la sii wado.
Hay’adda cuntooyinka oo iyadu horay u sheegtay in ay dacwad ka soo gudbineyso shirkadda Findus ayaan ilaa hadda wax dacwad ah soo gudbin.
Sidoo kale shirkadda Findus iyaduna wax dacwad ah kama aysan soo gudbin ganacsatada ay cuntooyinka ceerin ka soo iibsato. Annika Mohlin oo shirkadda Findus u qaabbilsan arrimaha saxaafadda ayaa TT u sheegtay in shirkaddeedu aysan dooneyn in ay gasho dacwad maxkamadeed oo jiitanta.
Waxaa keli ah oo boliiska dacwad u gudbiyey shirkadda Dafgårds oo shirkadda Globe Foods ku eedeeneysey in ay u soo gudbiyeen hilibkaas fardaha. Xeerilaaliyaha ayaa baaritaan ku sameeyey in ay shirkaddaasi gashay fal dembi oo khayaamo ah, laakiin waqti gaaban kadib joojiyey in uu sii wado dacwaddaas.